တစ်စုံတစ်ရာကိုတိုက်စားသွားမယ့် အချိန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တစ်စုံတစ်ရာကိုတိုက်စားသွားမယ့် အချိန်
Posted by နွယ်ပင် on Jun 21, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 20 comments
ဟုတ်တယ် နွယ်ပင် ပြောသလိုပါပဲ … အ ချိန်တွေက ကုစားပေးခဲ့တာပါ … ဒီကြားထဲ အမှတ်တရ အဖြစ်ပျက်များစွာ ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ပုံပြင် တပုဒ်လိုပါပဲ … ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အမှတ်တရာ ထက် ၊ နာကျဉ်းစရာ ၊ ၀မ်းနည်းစရာ အမှတ်တရတွေကို ပို မှတ်မိနေတတ်ကြတာ သဘာဝပဲလေ….။
ဟုတ်တယ် etone ရေ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အမှတ်တရထက် နာကျည်းစရာ လွမ်းမောစရာတွေကို ဦးနှောက်က ပိုပြီး မှတ်ထားပေးတက်တယ် ထင်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့လေ အချိန်က တစ်ဖြည်းဖြည်းဝေးကွာလာတဲ့အမျှ လုံးဝမမေ့နိုင်ရင်တောင် အရိပ်သာသာလောက်ပဲကျန်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ် …
အချိန်ဟာ အတော်ဆုံး ဆေးဆရာ ။ ဒါပေမယ့် အညံ့ဆုံး အလှပြင် ဆရာ လို့ ကြားဖူးပါတယ်ခင်ဗျာ
တစ်စုံတစ်ရာ ဆိုတော့ တစ်ခုထဲဆို ငါးဆယ် ပေါ့နော် ….
စိတ်ညစ်စရာ ဆို သိပ်ကြာကြာ မခံစားတတ်ဘူး။
စိတ်ညစ်ပြီးသွားရင် ပြီးသွားပြီ။ ပြန်ကောင်းသွားတဲ့ အချိန်မှာ စိတ်ညစ်ခဲ့ပါလား စဉ်းစားရင်တောင် ခပ်မေ့မေ့ရယ်.. ဒါပေမဲ့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ အချိန်ဆို အလိုလို ခေါင်းထဲက ထွက်လာတာ တန်းစီပြီးကို ထွက်လာလွန်းလို့.. ကိုယ့်ဟာကိုတောင် အံသြမိတယ်။
ပျော်ရွှင်စရာတွေထက် နာကြည်းစရာတွေက မေ့ပျောက်ဖို့လွယ်မယ် မထင်ပါဘူး။
အချိန်က ကုစားပေးမယ်ဆိုရင်တောင် ……
အချိန်တွေဘယ်လောက်ကြာကြာ ပြန်တွေးမိတိုင်းစဉ်းစားမိတိုင်း အဲဒီတုံးကလိုပဲ ခံစားရတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုကုသရမလဲဟင်?
Snowy ရေ အချိန်က အရာရာကိုကုစားတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှ ခံစားခဲ့တဲ့ ခံစားချက်တွေက တဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်လာပါလိမ့်မယ် . “အချိန်တွေဘယ်လောက်ကြာကြာ ပြန်တွေးမိတိုင်းစဉ်းစားမိတိုင်း အဲဒီတုံးကလိုပဲ ခံစားရတယ်” ဆိုတာကတော့ အချိန်သိပ်မကြာသေးလို့ ဖြစ်မှာပါ ဒါတောင် စစချင်းခံစားရတဲ့ အချိန်တုန်းကခံစားချက်မျိုးလောက်တော့ မမှီလောက်ဘူးထင်ပါတယ် ။ သေချာပြန်တွေးကြည့်ပါဦး ဘယ်နည်းနဲ့မဆို နည်းနည်းလောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အစတုန်းကခံစားနေရသလောက် နာကျင်ခံစားမနေရဘူးလို့ထင်ပါတယ် .
လူတွေက ပျော်စရာ ကောင်းတာတွေထက် ၊ ၀မ်းနည်း တာတို့ နာကျည်းတာတို့ကို ပိုပြီး မှတ်သားတတ်ကြ တာလား ။ အမှန်တော့ စိတ်ညစ်စရာ တို့ နာကျည်းစရာတို့ဆိုတာက လုံးဝ မမှတ်ထားသင့်တဲ့အရာတွေလို့ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဖြစ်ခဲ့တုန်းကလည်း အရမ်းကို စိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲပြီး ခံစားခဲ့ရသလို ၊ ပြီးသွားပြီး နောက် ပြန်စဉ်းစားမိပြန်ရင်လည်း အနည်းနဲ့အများတော့ စိတ်ထဲ တခုခု ပြန်ခံစားနေရတယ်။ အဲဒါကြောင့် ပျော်ရွှင်စရာတွေကိုပဲ တွေးပြီး မှတ်ထားပြီး ၊ စိတ်ညစ်တာတွေကို တော့ မြန်မြန်မေ့နိုင်အောင်ပဲ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်က အကောင်းဆုံး သမားတော်ပါပဲ …..
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အရာအားလုံးကို နားလည် သဘောပေါက်ပြီး မေ့နိုင်လာမှာပါလေ ….
လူတွေက ပျော်စရာ ကောင်းတာတွေထက် ၊ ၀မ်းနည်း တာတို့ နာကျည်းတာတို့ကို ပိုပြီး မမှတ်မိချင်တာပါ အတွေးထဲ မဝင်မိအောင် အတင်းကြိုးစားမေ့ပျောက် တက်ကြပါတယ် .
အဲတာကြောင့်ထင်တယ် ဦးနှောက်က ပိုပြီးမှတ်ပေးသလိုဖြစ်ပြီး ဒီကိစ္စတွေဆို ကိုယ်ကတောင်မတွေးရပဲ တိုက်ဆိုင်တာတွေကြုံတိုင်း အလိုလို တွေးမိရက်သား ဖြစ်သွားတက်ကြတယ်ထင်တယ် .
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ အချိန်ကြာလာတာတဲ့အမျှ ခပ်ဝေးဝေးတစ်နေရာမှာ အရိပ်တစ်ခုခုသာသာ ကျန်နေရစ်တက်ပါတယ် ..
ဟုတ်တယ်နော် …. ပျော်စရာဆို မေ့ပျောက်ဖို့လွယ်ပေမယ့် ……
နာကြည်းစရာဆို မေ့ပျောက်ဖို့မလွယ်ပါဘူး …………..
ပျော်စရာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ၀မ်းနည်းစရာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြန်မရတော့တာက အတိတ်မှ အချိန်တွေပဲ မဟုတ်ပါလား..။
လက်တွေ့ရင်ဆိုင်ပြီး တန်ဖိုးရှိမယ့်အချိန်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ရအောင် ယခုလက်ရှိအချိန်လေးတွေကို အသုံးချကြပါစို့..။
အင်း…အသက်ကြီးလာလို့လား မသိဘူး ပျော်စရာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နာကျင်စရာပဲဆိုဆို၊ ၀မ်းနည်းခဲ့ရတယ်လို့ပဲ သတ်မှတ်သတ်မှတ် အခုနောက်ပိုင်း သံဝေဂပဲရသလိုလို ဖြစ်နေတယ်။ သြော်.. ငါ့ကို ရင့်ကျက်အောင် သင်ပေးခဲ့တဲ့ ဘ၀သင်ခန်းစာတွေပါလား လို့ပေါ့။
မနွယ်ရေ … ပုံလေးက အတော်ခံစားလို့ကောင်းတာဘဲ … သူကြီးစကားနဲ့ဆိုရင် စကားတွေအများကြီးပြောနေလိုက်တာ ….. ကိုယ်ကြိုက်သလိုဆွဲတွေးလို့ရတာမို့ ..အတော်ရသမြောက်
စိတ်ညစ်စရာတွေများတွေ့ရင် ပြီးရင်ပြီးသွားမှာပဲလို့ စိတ်ဖြေတယ်။
အချိန်တန် ပြီးသွားမှာတွေအတွက် ခေါင်းကိုက်မခံတော့ဘူး။
တစ်စုံတစ်ရာကို တိုက်စားသွားမယ့် အချိန် ဆိုတော့
တစ်စုံတစ်ရာကို တိုက်စားချိန် ဘယ်လောက်ကြာမလဲ
တစ်စုံတစ်ရာကို အချိန်က တိုက်စားလိုက်လို့ တစ်စုံတစ်ရာက ပျောက်သွားရောလား
လူတိုင်းအတွတ် တိုက်စားချိန် စံနှုန်း ခြင်းတူပါသလား။
လူတစ်ယောက်၏ ခံစားချက် ၊ (ပျော်ရွှင်မှု၊ ၀မ်းနည်းမှု ၊ ၀မ်းသာမှု ) စသည်တို့ ကို ခံစားချက် အတိမ်အနက်ပေါ် မူတည်ပြီး တိုက်စားချိန်က တိုက်ရိုက် အချိုးကျပါသလား။
လူတစ်ယောက်၏ မှတ်ဥာဏ် မှတ်သားနိုင်စွမ်း မှတ်သားမှုအမူအကျင့် တို့က ခံစားချက်နဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိနိုင်ပါသလား
ကျမတုန်းကတော့ စစချင်းမှာ စကားနဲ့တောင် မပြောပြတတ်တဲ့ စိတ်နာကျင်မှုမျိုးခံစားခဲ့ရတယ်။ အခု
၂ နှစ်ကျော် ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။ တစ်စုံတစ်ရာကို အချိန်ကတိုက်စားသွားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အမှတ်တရ တခုအနေနဲ့တော့ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ဆိုင်မှုတွေ ရှိလာတဲ့အခါ ဆိုရင်တော့ ခဏတဖြုတ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လည်းပိုရင့်ကျက်လာသလို ခံစားမိတယ်။
ကျမအထင် လူတယောက်ရင့်ကျက်လာဖို့ ဆိုရင် ဘ၀ရဲ့ တချို့သော အချိုတွေ၊ အခါးတွေ၊ အကောင်းတွေ၊ အဆိုးတွေ၊ အချစ်တွေ၊ အမုန်းတွေ၊ အလွမ်းတွေ ၊ အပျော်တွေ ကို ခံစားတတ်ဖူးမှ ပိုပြီးရင့်ကျက်လာတတ် တယ်လို့ထင်မိတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ အဲဒီတုန်းက နာကျင်ခံစားခဲ့ရတာတွေက ကြာလာတဲ့တစ်ချိန်မှာ ရယ်မောစရာ
တစ်ခါတရံမှာ အဲဒီတုန်းက နာကျင်ခံစားခဲ့ရတာတွေ့က ကြာလာတဲ့တစ်ချိန်မှာ ပိုပိုပြီးကြေကွဲစရာ
အချိန်က ကုစားပေးမယ်ဆိုတာ အကြွင်းမဲ့တော့ မမှန်ဘူးလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။